Dastabej » माधव नेपाललाई अखिर दैनिक किन भेट्छन् प्रचण्ड ?
माधव नेपाललाई अखिर दैनिक किन भेट्छन् प्रचण्ड ? – Dastabej
माधव नेपाललाई अखिर दैनिक किन भेट्छन् प्रचण्ड ?
नेपालगन्ज । नेकपा एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको दबावपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोध कम गर्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मंगलबार दिउँसो भेट्ने कार्यक्रम थियो । नेपालले पनि ओलीलाई आफ्नै निवास कोटेश्वरमा स्वागत गर्ने तयारीमै थिए । पार्टी एकता जोगाउन पछिल्ला दिनमा अध्यक्ष ओली बढी लचक देखिएजस्तै नेपाल पनि सकारात्मक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला प्रचण्ड एकाएक कोटेश्वर पुग्छन् । मंगबार पनि त्यही भो । नेपाल निवास ओली पुग्नु अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुगे । मंगलबारमात्रै होईन, प्रचण्ड हरेक दिन नेता नेपाललाई भेट्न उनकै निवास पुग्छन् । प्रचण्डले नेपाललाई दैनिक भेट्नुको खास कारण के हो ? ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागि गराउनका लागि मनाउने जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका छन् । त्यसैले प्रचण्ड दिनदिनै नेपाल निवास कोटेश्वर पुगिरहेका छन्,’ नेपाल निकट एक नेताले भने ।
तर नेता नेपाललाई विश्वासको मत दिएको देउवा नेतृत्वको सरकार लाई असहयोग गर्नु नैतिकहीन काम ठहर्ने र सरकारमा आफू समर्थक सांसदहरुलाई पठाउँदा पार्टीको हैसियत, राजनीतिक र कानुनी जटिलताको झमेलामा फस्ने पक्का छ । त्यसैले पनि नेता नेपाल सकसमा परेका हुन । तर प्रचण्डले भने दैनिक भेटघाट गरी यी सबै समस्याका बावजुद पनि तपाई (नेपाल) को समर्थन गठबन्धनलाई आवश्यक रहेको भन्दै फकाई रहेका छन् । नेपालले केही दिनको समय माग गर्दै निर्णय दिने बताउँदै आएका छन् । सरकारमा सहभागि हुने वा नहुने बारे नेपालले निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा मन्त्री परिषद बिस्तार हुननसकेकाले पनि प्रचण्ड बढीजसो कोटेश्वर पुग्न थालेको नेताहरुको बुझाई छ ।
नेपाललाई सरकारमा सहभागी भएर सत्तारुढ गठबन्धन अघि बढ्न प्रस्ताव अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन । यो प्रस्तावलाई माधव नेपालले स्वीकारेका पनि हुन् तर नेपाल पक्षकै नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतको चर्को दवावका कारण सरकारमा सहभागी हुनबाट नेपाल पछि हटेका छन् । मंगलबार बिहान प्रचण्डसँग भएको भेटमा पनि ‘केही दिन कुर्न’ नेपालले भनेको स्रोतको भनाइ छ । माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन अप्ठेरो स्थितिमा अर्को प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । नेपाल पक्षबाट मन्त्री नपठाउने तर सरकारले गर्ने नियुक्तिमा भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी दिने गरी सरकारलाई सघाउन पनि प्रस्ताव आएको माधव नेपाल पक्षका एक नेताले बताए । ओली शासनकालमा नियुक्ति भएका झण्डै ३६ सयको नियुक्ति खारेज गर्ने र ती नियुक्तिमा २ हजारभन्दा बढी माधव नेपाल समूहलाई समेट्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको स्रोतको भनाइ छ । नेपाललाई पार्टी फुटाउनका लागि अहिले संख्यात्मक रुपमा पनि कठिनाइ छ ।
२० श्रावण २०७८, बुधबार ०६:३९ प्रकाशित